"Ikhuselekile kwaye icocekile"-Island Suite-Siesta Key Beach-
Fumana iOasis: Eli gumbi lisezantsi libonelela: iwasha / isomisi, isitya sokuhlamba izitya, imicrowave, iiTV ezi-2 zescreen esicaba, sqft 1,200, 2 iibhedi. + igumbi le-3 elongezelelweyo (umngxuma, jonga iifoto), ulala abantu aba-6 ngokukhululekileyo ezibhedini, ukumkani om-1 kunye neebhedi ezi-2 zokumkanikazi ezinepatio yangasese yakusasa.
IGumbo Limbo yindawo ekuchithelwa kuyo iiholide encinci enee-duplexes ezi-2 kuphela ekwabelwana ngazo ngedama elimnyama elisezantsi elifudunyezwa ngeenyanga ezibandayo zasebusika.
Indawo yokupaka yasimahla (iimoto ezi-2 ubukhulu), izitulo zaselwandle, iiambrela zelanga kunye ne-Wi-Fi.
Isanda kuhlaziywa igumbi lokulala eli-2 kunye negumbi lokuhlala, umgangatho ophantsi, obonelela ngobuninzi. 2 iindawo zokupaka.
Sisanda kufaka imigangatho emitsha eneebhodi zesiseko ezintsha zala maxesha, saphinda sapeyinta indlu yonke ngombala obizwa "Healing Aloe", sifakelwe iitoti ezintsha zokukhanya ukuze zikhanyise kakuhle, zifakele zonke iifestile ezintsha zefaux blinds njl. njl. kwigumbi lokulala elikhulu. Zonke iifestile ziifestile zempembelelo yeNkanyamba.
4.81 ·Izimvo eziyi-98
4.81 · Izimvo eziyi-98
Ubumelwane obumangalisayo, indawo ephambili ecaleni kolwandle oluhle kakhulu lwe-SIESTA KEY.
Umrhumo wentenetya yoluntu kunye neenkundla zebhola yevoli, indawo yokuphumla, amabala okudlala, iindawo zeBBQ nokunye okuninzi.
Ilali ikumgama wokuhamba (0.65 yeemayile.)
Ukukhwela kwasimahla kuyafumaneka kulo lonke elaseSiesta Key. Ndicela undibuzele inombolo zabo zomnxeba.
Izimvo eziyi-1 306
-Nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nam ngayo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso ngexesha lakho lonke lokuhlala. Ndiyakuthanda ukunceda.